टाटा मोटर्सको नयाँ शोरुम भरतपुरको हाकिमचोकमा (भिडियोसहित) – Saurahaonline.com
टाटा मोटर्सको नयाँ शोरुम भरतपुरको हाकिमचोकमा (भिडियोसहित)
चितवन, ०७ असोज । टाटा मोटर्स्ले आज भरतपुरको हाकिमचोकमा आकर्षक शोरुम, आर.बि. मोटर्सको उद्घाटन गरेको छ ।
नेपालका लागि आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. ले ग्राहकहरुको विशेष सेवाको लागि आकर्षक शोरुम उद्घाटन गरेको हो । सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. का सि.ओ.ओ.राजेश प्रसाद गिरी , टाटा मोटर्स्का कन्ट्री म्यानेजर हेमन्त पुरानिकले संयुक्त रुपमा शेरुमको उद्घाटन र्गनुभएको हो।
नयाँशोरुम उद्घाटनसँगै टाटा मोटर्स्ले नेपाली बजारमा आफ्नो सेवाविस्तार गरेको छ । नेपालमा टाटा प्यासेन्जर भेहिकल अन्तर्गत यो १७ औं आउटलेट हो । अत्याधुनिक डिजाइन सहित डाइनेमिक ड्राइभिङ्ग सुविधा रहेको सो कार रु.२२.५५ लाख बाट शुरु हुने नयाँ रिभोटर्न १.२ लि. पेट्रोल इन्जिनमा उपलब्ध रहेको छ।
शोरुम उद्घाटनसँगै सिप्रदी टे«डिङ्ग प्रा.लि. ले टाटा मोटर्स्को नयाँ Sporty Hatchback TIAGO नारायणघाट बजारमा ल्याएको छ । कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष राजन गौतम , युवा उद्यमी मञ्च चितवनका निर्देश सेढाँई , सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. का सि.ओ.ओ.राजेश प्रसाद गिरी , टाटा मोटर्स्का कन्ट्री म्यानेजर हेमन्त पुरानिक , लायन्स International District 325 B2 Nepal का Governor घनश्याम भट्टराई , सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. का महाप्रबन्धक प्रवीन खतीवडा , RB Motors का प्रबन्ध निर्देशक वीमल पौडेल , RB Motors का निर्देशक राजेन्द्र गेरै लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै, सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. का सि.ओ.ओ.राजेश प्रसाद गिरीले आफ्नाग्राहकहरुलाई नयाँ एवं उत्कृष्ट उत्पादनप्रदानगर्ने प्रतिबद्धता पूरा गर्नका निमित्त सबैले रोजेको र खोजेको नयाँ Hatchback TIAGO लाई नारायणघाटको बजारमा भित्राउन पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्नुभयो थियो।
सोही अवसरमा टाटा मोटर्स्का कन्ट्री म्यानेजर हेमन्त पुरानिकले ग्राहकहरुलाई स्थानीय स्तरमै विशिष्ट सेवा प्रदान गर्नका निमित्त डिलरसिप नेटवर्क विस्तार गर्ने क्रममा आर.बि. मोटर्स्लाई टाटा मोटर्स्को डिलरसिप नेटवर्कमा स्वागत गर्न पाएकोमा खुशी लागेको बताउनुभयो ।
साथै उक्त कार्यक्रममा आर.बि. अटो मोबाइल्स्का म्यानेजिङ्ग डाइरेक्टर बिमल पौडेलले सिप्रदी ट्रेडिङ्ग प्रा.लि. सँग सहकार्य गर्न पाउँदा आफूहरु निकै उत्साहित भएको बताउनुभयो । उहाँले अब आफ्नो नयाँ शोरुमबाट टाटाका अत्याधुनिक विशेषताहरु सहित सुविधासम्पन्न जेस्ट, बोल्ट, स्ट्रोम लगायत नयाँ स्पोर्टी ह्याचब्याक Tiago गाडीको पँहुच ग्राहकहरु साम्महुने कुरा समेत व्यक्तगर्नुभयो ।
साथै RB Motors का निर्देशक राजेन्द्र गेरै लगायतको सिप्रदीसँगको यो सहकार्यले स्थानीय स्तरबाटै ग्राहकहरुलाई आकर्षक एवं भरपर्दो सुविधाहरु प्रदानगर्न सक्षमहुने कुराको जानकारी गराउनुभयो थियो ।